स्मार्ट घर - स्मार्ट होम शियाओमी होमकिट अकारा द्वारा! अकारा हब - स्मार्टएमको साथ सेटको समीक्षा
झिओमी स्मार्ट होम अकारा द्वारा! अकारा हबको साथ सेटको समीक्षा
25 सेप्टेम्बर 2019
Aqar, xiaomi स्मार्ट घर
सबै साहसको सुरुवात हुन्छ। यदि तपाईंलाई आश्चर्यचकित छ कि जब स्मार्ट घरले तपाईंलाई पहिलो पटक प्रभावित गर्‍यो, तपाईं के जवाफ दिनुहुन्छ? मेरो केसमा यो फिल्मको पछिल्लो दृश्य हुनेछ "भविष्यमा फर्कनुहोस्।" र तपाईंले स्मार्ट घरको साथ कहिले साहसिक कार्य सुरू गर्नुभयो? जब सेन्सर र उपकरणहरूले भरिएको एक बुद्धिमान घर तपाईंको लागि केहि भयो, धन्यवाद तपाईंको जीवन सरल र अधिक सहज भयो? मैले ग्रिडबाट सियोमीबाट सेट गरिएको आकाराबाट बक्सहरूको सम्पूर्ण गुच्छ निकाले र मैले आफैलाई भनें: सुरु गरौं!
ठीक छ, तर हामी एक कदम पछि हटौं, किनकि सबैलाई आकारा वा अकारा हब के हो भनेर थाहा हुँदैन। यो सियाओमी सब-ब्रान्ड हो, स्मार्ट घरलाई समर्पित, जसको Xiaomi उत्पादनहरू भन्दा पनि उच्च गुणवत्ता छ। यो ठूलो पर्खाल पछाडि धेरै लोकप्रिय छ, र हालसालै युरोपमा आधिकारिक रूपमा देखा पर्‍यो। उपकरणहरू जसले अकारा हब बनाउँदछन् स्मार्ट होम कमाण्ड सेन्टर बनाउँदछ।
आजको समीक्षामा, म न्यूनतम स्मार्ट होम किटको साथ व्यवहार गर्ने छु जुन म कसैलाई पनि उनीहरूको घर स्मार्ट गर्न सुरू गर्न सिफारिश गर्दछु। किटमा निम्न उपकरणहरू समावेश छन् जुन होमकिट टेक्नोलोजी बनाउँदछन्:
अकारा हब गोल।
ढोका र विन्डो खोल्ने सेन्सर।
र थप तापक्रम र आर्द्रता सेन्सर।
मेरो लागि, स्मार्ट उत्पादनहरूको यो सेट सुरक्षित घरको लागि आधार हो र तिनीहरू सबैको लागि स्मार्ट घरको उद्देश्यलाई मार्गनिर्देशन गर्छन्। र साथै, यो सेटको साथ मूल्य-गुणवत्ता अनुपात अपराजेय छ।
श्याओमी स्मार्ट घर - पहिलो प्रभाव
आकाराका प्रत्येक उत्पादनहरू धेरै राम्ररी बनाइएको र प्याकेज गरिएको छ। बक्समा तपाईं सँधै निर्देशनहरूको साथ उत्पादन फेला पार्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई Xiaomi अनुप्रयोगहरू र उपकरणहरू कुनै समस्या बिना नै सञ्चालन र स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ। मेरो केसमा, यो चिनियाँ भाषामा म्यानुअल थियो, तर तपाईले अंग्रेजी वा पोलिशमा निर्देशनहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
सेन्सरसहितको गेट धेरै सियाओमी उत्पादनहरूको र.्ग दायरामा राखिन्छ, अर्थात् सेतो। ढोका र धुवाँ डिटेक्टर ठूलो छ, जबकि ढोका / विन्डोज, बाढी र तापमान को लागि सेन्सर वास्तवमै सानो छ। तपाई तिनीहरूलाई अक्सर कडा र colors्गको साथ संयोजनमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ (जस्तै कालोमा सेतो) वा काठमा। यो वास्तवमै धेरै राम्रो देखिन्छ।
ढोका र विन्डो खोल्ने सेन्सर केवल एक मात्र दुई तत्वहरू समावेश गर्दछ - सानो र ठूलो आयत। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, बुद्धिमान उपकरणहरूको सेट जुन घरमा आधारभुत गतिविधिहरू स्वचालित रूपमा आधुनिक र आकर्षक देखिन्छ।
अकारा उपकरणहरू सुरूवात र पेयरि गर्दै
सियाओमी स्मार्ट घर कन्फफिगर गर्न अकारा उत्पादनहरूमा आधारित दुई स्तरहरूमा गरिन्छ। पहिले तपाईंले अकारा हब गेटवे जोड्नुहोस्, र त्यसपछि व्यक्तिगत सेन्सरहरू। यो केहि रमाइलो छ भन्ने तथ्यको कारणले गर्दा, हामीले एक विशेष गाईड सिर्जना गरेका छौं जुन तपाईंले पाउनुहुनेछ यहाँ। यसले एप्पल होम अनुप्रयोग (एप्पल होमकिट) को साथ मिहोम र एकीकरणको लागि दुबै वर्णन समावेश गर्दछ। यसको लागि धन्यबाद, तपाईं कसरी जिओमी स्मार्ट होम टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न सिक्नुहुनेछ।
झिओमीबाट आकारा हब
अकाराको उत्पादन, जुन बिना हामी स्मार्ट घरबाट एडभन्न्चर सुरू गर्दैनौं, अकारा हब हो, अर्थात्। लक्ष्य किक। गेटवे अधिक उपकरणहरू जडान गर्न र वाइफाइ मार्फत यसको रिमोट कन्ट्रोललाई अनुमति दिन डिजाइन गरिएको हो। हामी यसमा अधिक सेन्सर वा नियन्त्रणहरू संलग्न गर्दछौं (अकारा रिले समीक्षा छिट्टै आउँदैछ)। यो सबै समयमा प्लग हुनुपर्दछ र घरको बिचमा हुनुपर्दछ र राउटरको नजिक हुनुपर्दछ।
धेरै नै फाइदा र शाओमी हबको तुलनामा मुख्य भिन्नता भनेको एप्पल होमकिटको लागि समर्थन हो। यसको मतलव दुबै गेट आफैं र सबै उपकरणहरू जुन हामी योसँग कनेक्ट गर्दछौं एप्पल उपकरणहरूमा गृह अनुप्रयोगमा सिधा जडान गर्न सकिन्छ। र मलाई MiHome धेरै मनपर्‍यो, तर म अझै पनि मेरो स्मार्ट घरलाई घरको मद्दतले प्रबन्ध गर्दछु। समीक्षाको पछिल्लो भागमा म यसलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गर्ने छु।
सियाओमीबाट अकारा हब मात्र एक लक्ष्य मात्र होइन। अर्को ठूलो फाइदा भनेको अलार्म प्रकार्य हो। गेटको भित्र बिल्ट-इन साइरन छ र यदि हामी यसलाई अलार्मको रूपमा सेन्सरहरूसँग जडान गर्‍यौं भने, यो आपतकालमा चर्को हुनेछ। गेटमा हामी एउटा बटन फेला पार्नेछौं जसको साथमा हामी अलार्म सक्रिय वा निस्क्रिय गर्न सक्दछौं, यद्यपि हामी यसलाई स्वचालित रूपमा वा दुई अनुप्रयोग मध्ये एकबाट गर्दछौं। मोशन सेन्सरहरूले स्मार्ट होम गार्डलाई घरका सदस्यहरूको सुरक्षा बनाउँदछ।
अन्तिम गेट प्रकार्य एक बत्ती हो। अलार्म साइरनको साथसाथै, गेटसँग बत्ती रहेको छ जुन रातो चमकको साथ संकेत ट्रिगर भयो। यो मोशन सेन्सरको साथ संयोजनको रूपमा रातको बत्तीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
एक लक्ष्य को लागी यो विकल्प धेरै छ।
ढोका र विन्डो खोल्ने सेन्सर
आधारभूत सेन्सरको आधारमा हामी जिओमी होमकिट टेक्नोलोजी भित्र घर अलार्म बनाउन सुरु गर्न सक्छौं खोल्ने सेन्सर हो। अपरेशनको सिद्धान्त निम्न अनुसार छ: सेन्सरमा दुई तत्वहरू हुन्छन् जुन एक अर्काको धेरै नजिक हुनुपर्दछ। एउटा एक चल तत्वमा चिपकाइन्छ, र अर्को स्थायी एकमा, उदाहरण: ढोका र यसको फ्रेम। यदि सेन्सरहरू बीचको जडान टुटिएको छ, उदाहरण: जब ढोका खुला छ, तब सेन्सरले पत्ता लगाउँछ कि तिनीहरू खुला छन्। यदि हामी तिनीहरूलाई उपयुक्त कोठामा थप्छौं भने, हामीलाई थाहा हुन्छ परिवर्तन कहाँ भयो।
सेन्सरहरू तिनीहरूलाई पछाडि टेपमा जोडेर माउन्ट गरिन्छ। स्थापनाको बखत, एप्लिकेसनले हामीलाई सूचित गर्दछ कि सेन्सर पर्याप्त नजिक छ कि छैन वा हामी अझै तिनीहरूलाई नजिक ल्याउन आवश्यक छ। नोट गर्नुहोस् कि दूरी वास्तवमै सानो छ - यो केहि मिलिमिटर मात्र हो। सेन्सर गेटवेमा थपे पछि, यो स्वचालित रूपमा MiHome Xiaomi र Apple House मा देखा पर्नेछ।
सेन्सर आफैंमा धेरै कन्फिगरेसन छैन, तर यो धेरै अटोमेसनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ:
बेसिक अटोमेसन आगमन फोन सूचना हो जुन सेन्सर मध्ये एकले ढोका वा विन्डोज खोल्ने पत्ता लगाएको छ। तपाईं यो गर्न छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जब मात्र तपाईं घरमा हुनुहुन्न। यो धेरै उपयोगी छ जब तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्न कि तपाईंले विन्डो वा ढोका बन्द गर्नुभयो। तपाईंले अनुप्रयोगमा आगो लगाउनुहुन्छ र सबै कुरा स्पष्ट छ।
अर्को स्वचालन अलार्म प्रकार्य हो। हामी औंल्याउन सक्छौं कि खोल्ने ढोका र विन्डोजले संसूचक ट्रिगर गर्दछ। यदि कुनै सेन्सरले अलार्म ट्रिगर भएको खण्डमा एउटा खोल्ने पत्ता लगाउँदछ भने, गेट रुन्छ र रातो चम्किन्छ, र हामी अलार्मको बारेमा फोनमा सूचना प्राप्त गर्नेछौं। हामी यसको समावेश निर्दिष्ट घण्टाका लागि सेट गर्न सक्दछौं वा हाम्रो स्थितिमा आधारित जब हामी घरबाट टाढा जाँदैछौं वा घर पुग्दै छौं।
हामी सेन्सरहरू द्वारा ट्रिगर गरिएको अन्य अटोमेसनहरू पनि निर्माण गर्न सक्दछौं। उदाहरण को लागी, जब हामी प्रवेश द्वार खोल्छौं, ब्लाइन्डहरू लुक्दछन् वा हलको प्रकाश आउँदछ।
एक बुद्धिमत्ता घरको चरण स्वत: स्वचालन हाम्रो गाइडहरू बीच फेला पार्न सकिन्छ।
बाढी सेन्सरले अब तीन पटक मेरो अपार्टमेन्ट बचत गरेको छ र यो मैले अहिलेसम्म गरेको उत्तम खरीदहरूमध्ये एक हो। सेन्सरले माथि उल्लेखित समान कार्य गर्दछ। जब यसले केहि पत्ता लगाउँदछ (यस अवस्थामा, जब यो भिजेको हुन्छ), यो तुरुन्त जानकारी गेटमा पठाउँदछ र कुचिन थाल्छ। गेट तब स्वचालित रूपमा अलार्म मोडमा जान्छ (चाहे यो चालु भयो वा हुँदैन), र यसले चिच्याउन र रातो चमक पनि गर्न थाल्छ। हामी फोनमा सूचना सहित सूचना पनि पाउँछौं जहाँ चुहावट पत्ता लाग्यो।
वास्तविक जीवन कहानी स्थापनाको दुई दिन पछि मात्र यो सेन्सरको प्रयोग हो। हामी भर्खर अपार्टमेन्टमा स moved्यौं र मुश्किलले सबै घरेलू उपकरणहरू स्थापना गर्यौं। मैले पहिले नै दुई बाढी सेन्सरहरू पाइसकेका थिएँ जुन मैले वाशिंग मेशिनको छेउमा र साइफन मुनि राखें, दुवै भान्सामा। एक साँझ, जब हामी टिभी हेर्दै थियौं, अचानक अलार्म र बाढी संवेदक रुँदै थियो, आवाज डरलाग्दो थियो र मेरी श्रीमती र मलाई के भइरहेको छ केहि थाहा थिएन। मैले तुरुन्तै मेरो सेल फोन समात्नुभयो र सूचनामा हेरे जुन कि शाओमी स्मार्ट होमले वाशिंग मेशिनमा चुहावट पत्ता लगाएको छ। वाशिंग मेशीन भान्साकोठामा बनेको छ र यसको मुनि वाटरप्रूफ छाप लगाइएको पट्टी छ। पट्टी हटाए पछि व्यावहारिक रूपमा हामीलाई बाढी। यो कि वाशिंग मिसिन होज बाहिर गिर र सबै बाढी गर्न थाले। फर्निचर र भुइँ सुकाउन धेरै दिन लाग्यो, तर यदि यो PLN for० को लागि सेन्सर नभएको भए हामीले यसको बारेमा कहिले पनि थाहा पाउँदैनौं किनभने स्ट्रिपले सबै पानी खन्याउनबाट रोक्छ, र हामी सम्भवतः भान्छा र फर्शका लागि नयाँ फर्निचर नष्ट गर्दछौं। पछि, त्यहाँ फेरि दुई पटक चुहावट भयो (फेरि वाशिंग मेशिनबाट र एक पटक डिशवाशरबाट हुज), तर हामीलाई थाहा थियो कि यसलाई तुरुन्त रोक्न कहाँ दौडनु पर्छ।
यस कथा पछि, मैले अरू दुईवटा सेन्सरहरू किनें जुन मैले अन्य स्थानहरूमा राखें जहाँ पानी पनि हुन सक्छ। शाओमी होमकिटद्वारा ग्यारेन्टी गरिएको लचिलोपना एक महत्त्वपूर्ण फाइदा हो।
धुम्रपान डिटेक्टरले अन्य सबै धुम्रपान गर्ने पत्ता लगाउन समान तरिकाले कार्य गर्दछ। हामी यसलाई आगोको स्थानको छेउमा छतमा स्थापना गर्दछौं (त्यसैले 95%% केसहरूमा यो भान्छा हो)। सेन्सर सेटिंग्समा, हामी यो अवस्थित भएको ठाउँको प्रकार परिभाषित गर्न सक्दछौं: यो उदाहरणका लागि गोदाम हो, जहाँ यो धेरै संवेदनशील हुनुपर्दछ, वा भान्साकोठा, जहाँ झूटा अलार्मको बढी सम्भावना हुन्छ।
पेयरिंग विधि अन्य सेन्सरहरूसँग समान छ, अर्थात् यसले खतरा पत्ता लगाउँदछ (यस अवस्थामा धुम्रपान गर्दछ) र एक आन्तरिक, धेरै चर्को साइरन सक्रिय गर्दछ, साथ साथै स्याओमी अकारा हब गेटवे र फोन सूचनाहरूमा अलार्म पनि सक्रिय गर्दछ। अहिलेसम्म, सेन्सरले मात्र एक पटक फायर गरिसकेको छ जब पत्नीले खाना खाइरहेको थियो। तसर्थ, यो सेन्सर हो कि उसलाई धेरै मनपर्दैन ????
मोशन सेन्सर अन्य अक्ारी उत्पादनहरू भन्दा फरक छ। आँखा समात्ने पहिलो चीज यसको सानो आकार हो। सीढीमा वा रेस्टुरेन्टहरूमा हामी ठूलो मुट्ठीको आकारको सेन्सरको लागि प्रयोग गर्दछौं। आकाराबाटको सेन्सर एकदम सानो छ, त्यसैले हामी यसलाई कुनै पनि स्थानमा लुकाउन सक्दछौं। सेन्सर एक्लै वा खुट्टाको साथ अर्डर गर्न सकिन्छ। खुट्टाले हामीलाई उपकरण पैतृक गर्न र एक असामान्य खाता अन्तर्गत सेट गर्न अनुमति दिन्छ। यसैले हामी यसलाई राख्न सक्छौं वा यसलाई भित्ता वा छतमा टाँस्न सक्छौं। सम्भावनाहरू यहाँ अनन्त छन्।
सेन्सर जोड्दै गेटको साथ, हामी यसको पूर्ण क्षमताको केही समय पछि प्रयोग गर्न सक्छौं। यो सुरक्षाको एक अतिरिक्त तत्वको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ अपार्टमेन्टमा आन्दोलन पत्ता लगाएर जब हामी गइसकेका छौं। हामी यसमा विभिन्न स्वचालित आधारहरू पनि गर्न सक्दछौं जस्तै बत्ती बाल्ने जब हामी कोठामा प्रवेश गर्छौं भन्ने सication्केतसहित यो रातमा मात्र गर्नुपर्छ। यो सेन्सर हाम्रो सस्ता प्रणालीको लागि एक सस्तो तर उपयोगी विस्तार हो।
यो सेन्सर अरूबाट फरक छ जुन सुरक्षा कोटिमा होइन, तर सुविधा कोटीमा। जे होस्, यसको समर्पित समीक्षा हुनको लागि यससँग धेरै थोरै सुविधाहरू छन्, त्यसैले मैले यसलाई यहाँ समावेश गरेको छु। नामले सुझाव दिए जस्तै, यसले दिएको कोठामा तापक्रम र आर्द्रता पत्ता लगाउँदछ। थप रूपमा, यसले दबाब पनि देखाउँदछ, तर हेक्टोपास्कलमा होइन, तर किलोपास्कलहरूमा - केवल एउटा शून्य थप्नुहोस् र सबै कुरा स्पष्ट हुनेछ। यी कार्यहरूको अतिरिक्त, सेन्सरले हामीलाई पनि दिन्छ कि दिईएको कोठामा तापक्रम इष्टतम (हरियो क्षेत्र) छ वा छैन।
सेन्सरले नै हामीलाई मौसमको बारेमा केवल आधारभूत जानकारी दिन्छ, तर स्वचालित रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने सम्भावनाहरू धेरै फराकिलो छन्। हामी हाम्रो Xiaomi स्मार्ट होम स्वचालनको अंश जडान गर्न सक्छौं तापमान वा आर्द्रतामा आधारित, जस्तै।
वातानुकूलन सुरु गर्दै यदि तापमान केही डिग्रीमा बढ्छ भने।
हावा कम आर्द्रता छ भने एक humidifier शुरू गर्दै।
तापक्रम तल झर्दा ब्लाइन्डहरू रोलि गर्दै, वा तिनीहरूलाई कम हुँदा तल सार्दै।
त्यहाँ वास्तवमै धेरै सम्भावनाहरू छन् र हामी सबै तपाईंलाई ट्यूटोरियल सेक्सनमा देखाउनेछौं।
अकारा को लागी आवेदन - MiHome र एप्पल हाउस
सबै स्मार्ट घर उपकरणहरूले कसरी काम गर्छन् भनेर जान्दै, हामी दुई मुख्य अनुप्रयोगहरूमा जान सक्छौं, अर्थात् शाओमी र एप्पल डोमबाट मिहोम। मैले पहिले लेखेको जस्तै, म गाईडमा विस्तृत कन्फिगरेसन छोड्दछु, र यहाँ म दुबै अनुप्रयोगहरूले हामीलाई प्रस्ताव राख्ने कुरा वर्णन गर्दछु।
मिहोममा एउटा ढोका थपेपछि र होमकिटसँग जोडी गरेपछि, पहिलो उपकरण देखा पर्नेछ, अर्थात् अकारा हब। MiHome स्तरबाट, पहिलो स्क्रिनमा तपाईं अलार्म र बत्ती बनाउन सुरू / असक्षम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए हामीसँग दुई थप दृश्यहरू छन् - स्वचालन र उपकरणहरू। स्वचालनमा, हामी दृश्यहरू (गाईड) निर्माण गर्छौं, र उपकरणहरू मार्फत हामी बढी सेन्सर थप्न सक्दछौं (यो मुख्य मिहूम मेनू मार्फत पनि सम्भव छ)। गेट विकल्पहरूको रूपमा, हामी कोठा सेट गर्न सक्दछौं जुन यो अवस्थित छ, अलार्मको भोल्यूम र आवाज (उदाहरणका लागि पुलिस साइरन) र बत्तीको रंग। मैले मध्यरातमा गेट सेट अप गर्न सफल भएँ र जब म अलार्म आवाज खोल्दा, यो आश्चर्यचकित भयो कि ढोकाले यसको पूर्ण क्षमता देखायो। हो, छिमेकीहरूले मलाई प्रेम गर्नुपर्छ ...
एप्पल हाउसमा, हामीसँग थोरै विकल्पहरू छन्। होमकिटमा गेटवे थपे पछि, उपकरण मुख्य मेनूमा देखा पर्नेछ। यो राम्रो छ कि नाम परिवर्तन गर्नुहोस् र यसलाई उपयुक्त कोठामा थप्नुहोस्। एप्पल हाउसमा, हामी अलार्म र बत्ती बन्द / निस्क्रिय गर्न र सियोमी मिहोममा जस्तै स्वचालित प्रदर्शन गर्न सक्दछौं। विकल्पहरू धेरै कम छन्, तर यो अनुप्रयोग प्रयोग गर्न यो मेरो लागि अधिक सुविधाजनक हो।
हामी उपकरणहरू थपेर उद्घाटन, बाढी, धुम्रपान र तापमान सेन्सर थप्दछौं। हामी यसलाई राम्रोसँग वर्णन गर्न र यसलाई कोठामा हस्तान्तरण गर्न सम्झन्छौं, धन्यवाद जुन हामीलाई थाहा हुन्छ कि केहि पत्ता लगाइएको छ। गृह अनुप्रयोगमा, हामीले तिनीहरूलाई देखिनको लागि केहि गर्नुपर्दैन - ढोकाले आफैँ तिनीहरूलाई थप्नेछ। यहाँ हामी तिनीहरूलाई वर्णन र कोठामा तिनीहरूलाई निर्दिष्ट। यस अवस्थामा त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छैनन्।
दैनिक जीवन अकाराको साथ
त्यस्ता उपकरणहरूको सेट राखेर, हामीसँग पहिले नै वास्तविक शाओमी स्मार्ट होम छ। म यसलाई प्रत्येक दिन नन स्टप प्रयोग गर्दछु र म धेरै सुरक्षित महसुस गर्छु। अवश्य पनि, यो १ minutes मिनेटमा आउने सुरक्षा टोलीको साथ पूर्ण PLN २,००० अलार्म होइन, तर हामी सबैलाई त्यस्तो केहि आवश्यक छैन। म मानिसहरुलाई सल्लाह दिन्छु जसले घर बनाउँदछन् दुबै स्मार्ट अलार्म बनाउन र एउटा सामान्य सेटअप गर्नुहोस् - वास्तवमा ठूलो दुर्भाग्य भएमा।
बाढी र धुवाँ डिटेक्टरहरू अदृश्य छन् र यो उनीहरूको भूमिका हो। तिनीहरू केवल दौडिएको मानिन्छ जब केहि हुन्छ। ढोका र विन्डो खोल्ने सेन्सरले मलाई सूचित गर्दछ यदि सबै बन्द छ वा यदि मैले केहि बिर्सिएको छ र मलाई विन्डो बन्द गर्नु पर्छ भने। र तापक्रम सेन्सरले मात्र मलाई सबै डाटा दिँदैन, तर काठमा साँच्चै राम्रो देखिन्छ
गेटवे बाहेक, सबै उपकरणहरू ब्याट्री सञ्चालित र वायरलेस हुन्। तिनीहरू एक ब्याट्री मा कति लामो टिक्न सक्छ? यो भन्न गाह्रो छ किनकि मैले तिनीहरूलाई आधा भन्दा बढी वर्ष पहिले स्थापना गरें, र अहिलेसम्म मैले ब्याट्री परिवर्तन गर्ने बारे चिन्ता लिनुपर्दैन।
यदि तपाईं सामान्यमा शियाओमी स्मार्ट वा शियाओमी स्मार्ट होमको साथ आफ्नो साहसिक कार्य शुरू गर्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि अकारा उपकरणहरूको सेट तपाईको मुटुमा हात राखेर। केवल जाँच गर्नुहोस् कि यिनीहरू हाम्रो उत्पादन पृष्ठमा सबैभन्दा नयाँ उपकरणहरू हुनेछन्। तिनीहरूको मूल्य व्यावहारिक रूपमा उही हो, तर नयाँ पीढीले जिग्बी 3.0.० प्रोटोकोलमा काम गर्दछ, जसले राम्रो संचार, थप उपकरणहरू र कम ऊर्जा खपत अनुमति दिन्छ।
यदि तपाईं भयानक स्विचबोर्डको साथ स्मार्ट घर जोड्नुहुन्छ, भित्तामा फोर्जिंग गर्दै, केबुलहरू खिच्दै र प्रोग्रामिंग भाषा जान्नको लागि आवश्यक छ भने, म तपाईंलाई खुशी छु कि यो विगतको कुरा हो! ☺ अब हामी स्मार्ट होम उपकरणहरू टाँस्दछौं जहाँ हामी तिनीहरूलाई चाहान्छौं वा मात्र त्यहाँ राख्छौं। सम्पूर्ण सेटअप शाब्दिक रूपमा केहि क्लिकहरू हुन्, र यस्तै स्वचालन पनि छ। र केही वा केही हजार zlotys खर्च गर्नुको सट्टा, तपाईं स्मार्ट घर पाउन सक्नुहुन्छ, 400 zlotys भन्दा कम रकममा बजेट बन्द गर्दै। सम्मेलकहरू र निर्माणकर्ताहरूको फौजको सट्टामा, तपाईं आफैले वा मद्दतको साथ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईंले यसको लागि केहि हप्ता पर्खनु पर्दैन, एक साँझ पर्याप्त छ।
र यो स्मार्ट घरको प्रकार हो जुन हामी पोल्याण्डमा लोकप्रिय बनाउन चाहन्छौं। स्मार्ट घर त्यो हो:
यहाँ पोल्याण्डमा स्मार्ट हुनुको बारेमा सब भन्दा ठूलो पोर्टलमा (चाँडै;) मा धेरै समिक्षाहरू मध्ये पहिलो हो।
Gearbest मा अकरा हब किन्नुहोस्
समीक्षा, शाओमी होम
आकारा एम २ बनाम अकरा एम १ एस - भिडियो गोल तुलना १२ मिनेटमा!
Aqar, अकारा एम 1 एस, आकारा m2
यकिन छैन यदि अकरा M2 वा अकरा M1S तपाईंको लागि हो? त्यसोभए यो चलचित्र तपाईको लागि हो! आज हामी दुई नयाँ अकारा गोलहरू तुलना गर्छौं!